'साधना र सिर्जनाले धनबहादुर गायक अमर छन्'| Gandaki Voice
'साधना र सिर्जनाले धनबहादुर गायक अमर छन्'
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशले स्व. धनबहादुर गायकको स्मृतिमा शोकसभा आयोजना गरेको गर्यो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले साधना र सिर्जनाले धनबहादुर गायक अमर बनाइरहने बताए । उनले आफूले २०३५, २०३६ साल तिर डाँफे कला मन्दिरमा गायकले मादल बजाएको देख्दा नै मन्त्रमूग्ध भएको स्मरण गरे ।
अर्थमन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय भाइरल भन्ने शब्दले सच्चा कलाकार मारमा परेको बताए । अर्थमन्त्री गुरुङले भाइरल दुई चार दिनका मात्र हुने तर साधना, त्याग र तपस्याले आएको सिर्जना वर्षौं यादगार रहने स्पष्ट पारे । उनले गण्डकी प्रदेशमा रोयल्टी संकलन अभियानलाई पूर्णरुप दिन आफूले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारीले धनबहादुर गायकको निधनले समग्र नेपाली संगीत क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको बताए । उनले आफू पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको नेतृत्व गर्दै गर्दा आयोजना हुने कार्यक्रममा धनबहादुर गायकको नियमित उपस्थिति रहने गरेको स्मरण गरे ।
गायकको मादल बजाउने कलाले नै आफूलाई आकर्षित बनाएको उनको भनाई थियो । सांसद पहारीले कलाकारको सिर्जनाको संरक्षणमा प्रदेश सरकारसँग आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले धनबहादुर गायकका सिर्जनाले समाज रुपान्तरणमा टेवा पुर्याएको औंल्याए । उनले समुन्नत संस्कृतिको आधार भनेकै गीत संगीत भएको उल्लेख गरेका छन् । मानिस जन्मदा लिएर आउने एउटै सत्य मृत्यु भएको भन्दैै धनबहादुरका अजम्बरी सिर्जनाको संरक्षणमा सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले धनबहादुर गायक पोखराकै पहिचान भएको बताए । उनले भने, “धनबहादुर सिङ्गो पोखराकै पहिचान हुन् । शालीनता, सिष्टता र निरन्तर लगावका कारण नै उनको गरिमालाई बढाएको छ ।” उनले धनबहादुरको देहावासनले साराङ्गी र मादल जस्तो लोकबाजा बजाउने एक सच्चा अभिभावक गुमेको स्पष्ट पारे । सभापति केसीले सरकारले कलाकारको हित र अधिकारका लागि देखिने गरी नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आयोगका संयोजक दामोदर वैरागीले धनबहादुर परिस्थिति अनुसार सिर्जनालाई प्रस्तुत गर्न सक्ने कलाकार भएको बताए । नेपालमा बोल्ने तर नगर्ने समस्या भएको बताउँदै उनले कलाकारका सिर्जना र सांस्कृतिक महत्वका विषयलाई जोगाईराख्न सरकारले नीतिगत रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष प्रजापती पराजुलीले धनबहादुसँग आफ्नो भेट २०३७ सालमा भएको स्मरण गरे । उनले राज्यले कलाकारलाई सम्पत्तिको रुपमा अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कलाकारको हक अधिकार वञ्चित हन नहुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका केन्द्रिय अध्यक्ष रमेश बिजीले आफू स्याङजादेखि पोखरा आएर संघर्ष गर्दा अभिभावकको रुपमा धनबहादुरलाई पाएको स्मरण गरे । गायकका सिर्जना संरक्षणमा प्रतिष्ठान कटिबद्ध भएर लाग्नेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे ।
सप्तरङ्गी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पदमराज ढकाल, धनबहादुर गायकका छोरा दिलिप गायक, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष वर्तमान पुरुषोत्तम न्यौपाने, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङ, गायक राजन कार्कीलगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए ।
स्व. गायक ‘नरोउ मायालु....’, ‘बेली र चमेली...’, ‘फूल मायामा नभुल..’ लगायतका गीतका सर्जक हुन् । उनले झलकमान गन्धर्व राष्ट्रिय सारंगी संरक्षण पाठशाला प्रतिष्ठान मार्फत मादल र साराङ्गीको प्रशिक्षण गराउँदै आएका थिए । उनको केही दिन अघि उच्च रक्तचापका कारण निधन भएको थियो ।